EVY’s Kitchen | Food Magazine Myanmar | Page 4
Oreo Buns Oreo နှစ်သက်သူတွေ အကြိုက်တွေ့မယ့်မုန့်ပါ။ ပေါင်မုန့်အဆာသွတ်ဖို့အတွက်လည်း ခက်ခက်ခဲခဲ လုပ်စရာမလိုဘဲ ရှိပြီးသား Oreo Biscuit ကို အသုံးပြုနိုင်တာကြောင့် လူလည်းသက်သာပါတယ်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ► အစု (၁) ♦ ပေါင်မုန့်ဂျုံ – ၂၃ဝ ဂရမ် ....
Cream Puff Custard Cream အပြင် Whipping Cream ပါထည့်လုပ်ထားတဲ့ Cream Puff ပါ။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ နွားနို့ – ၂ဝဝ ဂရမ် ♦ ထောပတ် – ၈ဝ ဂရမ် ♦ ....
Cheddar Cheese Soft Buns
Cheddar Cheese Soft Buns နူးညံ့တဲ့ နို့ပေါင်မုန့်ကို မရောနိစ်၊ ထည့်မဖုတ်ထားတဲ့ ဃ့နိမေ ခ့နနျန နဲ့တွဲဖက်ထားတာကြောင့် ဆိမ့်ပြီး စားကောင်းလှပါတယ်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ အစု (၁) ♦ ပေါင်မုန့်ဂျုံ – ၂၃ဝ ဂရမ် ♦ Yeast ....
Cheese Bread ချိစ်အရသာငန်ငန်ဆိမ့်ဆိမ့် အပြင်အချိုဓာတ်ရအောင် သကြားနည်းနည်းပါ ထည့်လုပ်ထားတဲ့ အရသာရှိလှတဲ့ ချိစ်ပေါင်မုန့်ပါ။ ကော်ဖီနဲ့တွဲဖက်စားဖို့လည်း လိုက်ပါတယ်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ အစု (၁) ♦ ပေါင်မုန့်ဂျုံ – ၂၃ဝ ဂရမ် ♦ Yeast ....
Portuguese Egg Tart ဒီကြက်ဥမုန့်ကတော့ ခါတိုင်းလို ပုံမှန်မုန့်သားမဟုတ်ဘဲ Puff Pastry ကို အသုံးပြုထားတဲ့မုန့်ပါ။ စင်္ကာပူမှာတော့ KFC လိုမျိုးဆိုင်တွေမှာ Portuguese Egg Tart ဆိုပြီး ရောင်းပါတယ်။ ► ပါဝင်ပစ္စည်းများ ♦ Ready made puff ....